ရွဲ့နေတာတွေ ပြင်တည့်ကြစို့… Fixing what’s broken | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရွဲ့နေတာတွေ ပြင်တည့်ကြစို့… Fixing what’s broken
ရွဲ့နေတာတွေ ပြင်တည့်ကြစို့… Fixing what’s broken
Posted by kai on May 11, 2011 in Community & Society, Opinion - Op-ed, U.S. News | 8 comments
အိုဘားမား လိုက်ပို့ နေတဲ့ အီးမေးလ်ခေါင်းစဉ်က (Fixing what’s broken )..တဲ့..။ အဲဒါကို စိတ်ပေါက်သလို ဘာသာပြန်ရေးလိုက်တာပါ..။
သမ္မတက.. ဒီနေ့ ယူအက်စ်-မက်ဟီကိုနယ်စပ်ကို သွားတယ်..။
အဲဒီမှာ.. နယ်စပ်ကခိုးဝင်သူတွေကို တားဖို့ဆီးဖို့လုပ်ရင်းနဲ့.. သူ့ရွေးကောက်ပွဲကတိတခုကို ပြန်ဖေါ်ချင်ပုံရပါတယ်..။
အဲဒါ.. ဘင်လဒင်အသတ်ခံရလို့..အမေရိကန်တွေသူ့ပေးထားတဲ့.. အမှတ်တွေရယ်..။ အလုပ်အကိုင်သစ်တွေ ပြီးခဲ့တဲ့ လက သိန်းချီဖေါ်နိုင်လို့ လူတွေပျော်နေတာရယ်နဲ့ရောပြီး..ေ၇ာင်တော်ပြန်နဲ့ ရောကြိတ်လိုက်တယ်လည်း ဆိုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်..။
အဲဒီကောင်းတာလေးတွေကြောင့် .. လူထုချစ်ခင်မှုရေချိန်အမြင့်ဆုံးအချိန်မှာ.. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိစ္စကို ကိုင်မယ်အော်လိုက်တာပါပဲ..။
ဒါက..သူ့ သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဝင်စဉ်က ထားခဲ့တဲ့ ကတိလည်းဖြစ်ပါတယ်..။
အခုလာမဲ့.. ၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ..အခြေအနေကောင်းမကောင်းတော့မသိ..။ အခုလိုလုပ်တာဟာ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အင်မတန်အန္တရာယ်များတာတော့ အမှန်ပါ။ ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေက.. အင်မီးဂရန့်တွေကြောင့် ဘာဖြစ်ပါတယ်..ညာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး.. အတင်းတုတ်နေကြချိန်ဖြစ်လို့ပါ။ တီးပါတီဆိုရင်.. အီလီးဂဲတွေကို မုန်းတာမှ.. ခိုက်ခိုက်တုန်လို့..။
ယူအက်စ်မှာ လူ ၁၂သန်းလောက်က ..တရားမ၀င်ခိုးနေနေကြတယ်မဟုတ်လား.။ ဒီလူတွေကို သူက တရားဝင်နေခွင့်လမ်းကြောင်းပေါ်တင်ပေးဖို့.. လုပ်တာပါ။
ဆိုတော့.. လူ ၁၂သန်း အမေရိကန်ဖြစ်လာတော့မယ်ပေါ့နော..။
အဖေက..ယူအက်စ်ကိုကျောင်းသားဘ၀နဲ့လာပြီး ..အမေရိကန်မ ယူ..သူ့ကိုမွေး..ပစ်ထားခဲ့ပြီး ကင်ညာနိုင်ငံပြန်သွားတာမို့ .. ဗီဇာကိစ္စတွေ..အမေဆီက..ကြားဖူးနေမှာအမှန်ပါ..။
လောလောဆယ်တင်.. အဒေါ်( အဖေရဲ့ညီမ)က ..ယူအက်စ်မှာ အိုဗာစတေးနဲ့ မိထားလိုက်သေးတာမို့ .. ဒီသမ္မတဟာ.. အင်မီးဂရန်ခေ့ါ်တဲ့..ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်သူတွေအကြောင်း တော်တော်သိမယ် ယူဆရပါတယ်..။
ယူအက်စရောက် မြန်မာတွေမှာလည်း.. ဗီဇာအဆင်မပြေသူတွေရှိတာမို့ .. ဘာပဲပြောပြော.. ဒီအင်မီဂရေးရှင်းဥပဒေ ပြုပြင်မှုကြီးကို ..ကြိုက်ချင်တာတော့ အမှန်ပါ..။
ပြသနာက.. ဒီလူ ၁၂သန်း.. အစိုးရဆီမှာ..တောင်းစားကြရင်ဖြင့်.. နကိုတောင်းစားနေသူတွေခမြာကိုတာလျှော့နိုင်မှာမို့ … တော်တော်တော့ ဦးနှောက်ခြောက်စရာပါပဲ..။
ဒီလိုမျိူး.. ဆွမ်းကြီးလောင်းပွဲ.. ( အိုဗာစတေးတွေ..ဗီဇာပေးပစ်တာ)ယူအက်စက..ရီပါ့ဗလစ်ကင်န်သမ္မတ ရော်နယ်ရီဂင်လက်ထက် လုပ်ဖူးပါတယ်..။
ယူအက်စ်က…ဒီလိုလုပ်တာကိုကြည့်ပြီး ..မြန်မာပြည်မြေမှာမွေး..။မြန်မာပြည်မှာကြီး.. မြန်မာရေ့ကိုသောက်ပြီး.. မြန်မာမဟုတ်ဖူးလို့.. ခေါင်းစဉ်တပ်..အမျိုးခွဲခြားကြတဲ့… မြန်မာတို့ရဲ့.. လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေဆိုတာကြီးကို.. အံ့အားတော့ သင့်မိပါရဲ့..။
ဘာတဲ့.. နိုင်ငံခြားသား..။ နိုင်ငံသားပြုခြင်းခံရသူ၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသား… စုံနေတာပါပဲ..။ ကြားထဲက..ဧည့်စာရင်းဆိုပြီး.. တိုင်းရင်းသားစစ်စစ်တွေက..ကိုယ့်မြေနေ..ကိုယ်ဧည့်သည်စာရင်းတိုင်နေရသေးတာကိုး..။
ဒါ့အပြင်.. ၁ အက်အာစီနဲ့.. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တက္ကသိုလ်တွေတက်ရင်းတန်းလန်း… ကျောင်းထုတ်ခံရသူတွေလည်း မနည်းသေး..။
မြန်မာတွေလည်း.. မြန်မာ့လူဝင်မှုကြိးကြပ်ရေးဥပဒေတွေပြင်… ရွှဲ့နေတာတွေ ပြင်တည့်သင့်ပြီ…။
(အောက်က.. အိုဘားမားက.. နိုင်ငံသားတွေဆီပို့ တဲ့စာပါ..။ ဖတ်ကြည့်ကြပေါ့..)
မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီး ဘယ်နိုင်ငံမှာ မရောက်ဘူးတဲ့ မြန်မာတစ်ဝက်ပါသူကို နိုင်ငံခြားသား လုပ်ရမယ်တဲ့။
မြန်မာစစ်စစ်ကို ဇယားတွေ ရှုပ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေ တောင်းလို့ နိုင်ငံသားကဒ်မကိုင်နိုင်။
နယ်စပ်က ဝင်လာတဲ့ ဖြူဖြူ မည်းမည်းတွေက ဖွတ်ကဒ်ကိုင်တာတို့၊ ပိုက်ဆံကိုင်တာတို့နဲ့ လုပ်လိုက်တာ နိုင်ငံသားဖြစ်ကရော။
ကျောင်းသားကဒ်ကနေ ၁၈ နှစ်ပြည့် လဲတုန်းကများ လ၀ကရုံးရှေ့မှာ လူအများရှိတာတောင် ပေါ်တင်ကြီးကို လက်ထဲက ပိုက်ဆံတွေကို လုယူတာများ ဓါတ်ပုံတောင် ရိုက်ထားချင်တယ်… လုံးဝကို အရှက်မရှိဘူး …
ရွှဲ့နေတာတွေ တည့်ကြဆို အကုန်လုံး၇ွဲ့စောင်းနေတာကြီးပဲ…။ ဘယ်ကနေပြန်တည့်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး
သူငယ်ချင်းတွေ အခြားနိုင်ငံမှာ citizen လျှောက်တာ တော်တော်နဲ့ မရဘူး။ သူတို့က တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတော့ ငါတို့ကို အထင်သေးတယ် ။ တော်တော်နဲ့ ချမပေးဘူးလို့ သူငယ်ချင်းက ပြောတယ်။ ဒါဆိုရင် ငါတို့နိုင်ငံလည်း တော်တော်ဂုဏ်ယူဖို့ ကောင်းနေပြီ။ သူများနိုင်ငံတွေထက်တောင် citizen ရဖို့ ခဲယဉ်းသေးတယ်။
ဧည့်စာရင်းတိုင်ခိုင်းရတာကရတဲ့ဆွဲရတာ(ဖမ်းရတာ)လွယ်အောင်လို့ပါ၊ ဒီလူဘက်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာခြေရာခံရတာလွယ်အောင်ပါ၊ ဦးနေ၀င်းဟာနိ်ုင်ငံခြားသားတွေအပေါ်နာကျည်းချက်ရှိပုံရပါတယ်၊ ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်တက္ကသိုလ်တွေ တက်ရင်းတန်းလန်း ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့လူတော်တွေ အတွက်တော့ဝမ်းနည်းစရာနှမျှောစရာပါ၊ မြန်မာပြည်မှာကတော့လုံခြုံရေးသာအဓိကပါ၊ နိုင်ငံသားခက်ခဲတာ မှတ်ပုံတင်ခက်ခဲတာ ကတော့ကမ္ဘာ့အလယ်မှာဂင်းနစ်ဘုတ် ကျိန်းသေ၀င်ပါတယ်။
ဧည့်စာရင်းစနစ် သက်ဆိုးရှည်ရတဲ့ နောက်အကြောင်းတစ်ခု ရှိသေးတယ်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် သူကိုယ်တိုင်ပြောပြတာ သူ့အဖေက အဲဒီခေတ်က ရပ်ကွက်ဥက္ကဌလေ “ ဧည့်စာရင်းလာတိုင်တဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ ငါ တက္ကသိုလ်တက်ပြီး ဘွဲ့ရလာတာ လေ” တဲ့
ဒီမှာမွေး…. ဒီမှာကြီး… တဲ့ အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ မြေးဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်ကို..
ဒီနိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်လေးရဖို့… မလွယ်လိုက်တာ….
ဒီနိုင်ငံသား ..ဒီလူမျိုးပါဆိုမှ..သူတို့က မှတ်ပုံတင်မထုတ်ပေးရင်..ဘယ်သူက ထုတ်ပေးမှာလဲ..
အဲဒါကြီးမပါရင်လည်း….သွားရလာရ အဆင်ကို မပြေဘူး….
ဧည့်စာရင်း စစ်တာ မပြောပါနဲ့… ခရီးသွားရင်း… ကားပေါ်တောင် ခဏ ခဏ အစစ်ခံနေရတာ..
ပြီးတော့…မှတ်ပုံတင်ပါတဲ့သူက အရစ်ခံရတယ်… မပါတဲ့သူက လဘက်ရည်ဖိုးဆိုတာနဲ့တင် အေးဆေးဖြစ်သွားရော..
ရွဲ့နေတာ… စောင်းနေတာတော့ မပြောပါနဲ့တော့….. အဲဒီ ရွဲ့တာ စောင်းတာလည်း ကမ္ဘာစံချိန်ပါပဲဗျာ…